ရောဗာ hose_ steel Spirale Wire s
Jidier Company (တိုတောင်းသောပုံစံ - JDE) သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအရည်ရေပိုက်များဆီသို့အပ်နှံထားသည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၅ သန်းနှင့်စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာဒေါ်လာသန်း ၇၀ ဖြစ်သည်။ JDE သည်တရုတ်စွမ်းအင်နှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ထူးချွန်မှုအပေါ်တွင်မဟာဗျူဟာကိုအခြေခံသောမြင့်မားသောဖိအားမြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်များ၊ JDE ကုမ္ပဏီ၏ရေပိုက်များသည် SAE J517၊ DIN / EN853, EN854, EN857, ISO, GB နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အရည်အသွေးပြည့်မီသောပစ္စည်းများနှင့် ad-vanced ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကိုပြည့်မီစေရန်ထုတ်လုပ်သည်။ JDE အသင်းငယ်သည် ကျနော်တို့ရေပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အမှားအယွင်းများနှင့်ချို့ယွင်းချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများအား OEM-level ကိုအရည်အသွေးမြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။ စျေးကွက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နည်းပညာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်နှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးရန်အမှားအယွင်းများ (သို့) ရေပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ချွတ်ယွင်းမှုများကိုဖယ်ရှားရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားပြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသောအဖွဲ့များသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်။ စွမ်းရည် - တစ်လလျှင် ၁,၀၀၀,၀၀၀ မီတာ (တစ်နှစ်လျှင်မီတာ ၁၂ သန်း) သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း JDE နည်းပညာအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ၁၂၀ ကျော်ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ JDE နည်းပညာအဖွဲ့သည်တက်ကြွစွာ R &amp; amp; D လေထုကိုဆက်ထိန်းထားရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်အသစ်ဖြေရှင်းမှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းလိုင်းများကိုဆက်လက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးချသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားများ၊ အဝေးပြေးလမ်းမစက်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုတွင်းစက်ယန္တရားများ၊ သစ်တောသုံးစက်ယန္တရားများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းကိုင်တွယ်သည့်စက်ယန္တရားများ၊ စက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ကိရိယာများ၊ ဂိုဒေါင်ကိုင်တွယ်သည့်စက်ကိရိယာ၊ သန့်ရှင်းရေးစက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၊ လေဆိပ်နှင့်သင်္ဘော။ အဏ္ဏဝါရွက်လွှင့်ကိရိယာများ၊ လေရဟတ်တာဘိုင်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ သံမဏိထုတ်လွှင့်သောဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်စသည်တို့ဖြစ်သည်
CNG ရေပိုက်： SAE J30 R6 / IS15722： အထည်ခြည် Cng သွယ်တန်းထားသောရေပိုက် CNG ရေပိုက်： SAE J30 R6 / IS15722： အထည်ခြည်
အတွင်းပိုင်းရေပိုက်ဆီနှင့်လောင်စာဆီခံနိုင်ရည်ရှိသောဒြပ်ရော်ဘာ။ ရေနံ၊ လောင်စာဆီနှင့်လေထုအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပလတ်စတစ်ဆေးကြောခြင်း၊ Static anti-static: R &amp; lt; 1MΩ Reinforcement 1 Textile BRAID အလုပ်လုပ်သောဖိအား ၅ Bar / 72.5 Psi လည်ပတ်မှုအပူချိန် -40 မှ + 100 ° C အထိပြင်းထန်သောအပူချိန်တွင်ကြာရှည်စွာလည်ပတ်ခြင်းကြောင့်သက်တမ်းတိုခြင်းကိုသက်တမ်းတိုစေသည်။ အကြံပြုထားသောအရည် Fittings အမျိုးအစား 1. FERRULE: အဘယ်သူမျှမ skive အမျိုးအစား CNG-XX; ၂။ ထည့်ပါ။ DPX1XX (X: ရွေးချယ်နိုင်သည်) CNG တပ်ဆင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်များတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
ချောချောမွေ့မွေ့: SAE 100R16 / ISO 11237 2SC / EN853 2ST ချောမွေ့သော SAE R2AT ချောချောမွေ့မွေ့: SAE 100R16
* Smooth Cover ⊕SAE 100R16 ⊕ISO11237-1 R16 ⊕ISO1307
ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ အရက် ၊ ဥပမာ ၊
ဥပမာ ၊ အောက်မှာ၊
JET WASHER 2W ထမ်းပိုး
JET WASHER 2W လုပ်ဆောင်သူ က သင့် ကို ပြောထားသည် ။ ဥပမာ ၊ ဆုံးရှုံးမှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
Hose application - သက်ဆိုင်သော application အရသင့်လျော်သောသံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးနှင့်အတူဟိုက်ဒရောလစ်ချောမွေ့သောပိုက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အထူးအရည်များသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်များသည်အထူးရေပိုက်များအသုံးပြုရန်အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာနမူနာများဖြစ်သည်။
Washer Hose ပြုလုပ်သူ သင့်ကို နားလည်ဖို့ သွားရမည်။ ultra- high ရှောင်
Washer Hose ထမ်းပိုးကွက်က် . ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာကို စိုးရိမ်နေရပါတယ် - အမြင်ကွယ်အေးအန္တရာယ်မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရေဖျက်ဆီးကို သန့်ရှင်းခြင်းရဲ့ ပြဿနာကို ဘာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ပြီး ရွေးချယ်ပြီး ရွေးချယ်ပြီး ရွေးချယ်ပြီး အသိအမှတ်ပြု ရန် ပြသည်
ရွေးချယ် ချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီး ရေခဲ့ ဥပမာ ၊
Washer Hose ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိပ္ပာယ် နဲ့ ultra- high ရှင်းဖျက်ဆီး pump နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ သန်စွမ်းမှု အတွင်း ၊ ဥပမာ ၊
ဆဲ လ် Spiral Wire Hydraulic Hose အဓိပ္ပာယ် အများ စု အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ ၊